Weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay Tel Aviv
Alon Rizkan, oo ah dhakhtar ka tirsan adeegga samatabbixinta ee Israa’iil ee Magen David Adom, ayaa ku tilmaamay "wacitaan aad u adag" markii uu yimid Elad, oo ah magaalo u dhow Tel Aviv. Waxa uu sheegay in uu aqoonsaday saddex qof oo ku dhintay goobo kala duwan. Ugu yaraan afar kale ayaa ku dhaawacmay oo mid ka mid ah uu dhaawiciisu halis yahay, sida ay saraakiishu sheegeen.
Warbaahinta Israa’iil oo soo xiganaysa booliiska ayaa sheegtay in ay jiraan labo nin oo weerarka soo qaaday, waxaana xalay saqdii dhexe ay booliisku sheegeen in ay wali baadi goobayaan kooxihii weerarka geystay. Waxayna shacabka ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobtaasi, ayna kusoo wargeliyaan gaadiidka iyo dadka ay ka shakiyaan.